Maguta matanhatu pagumi akanakisa epasirese ekutamisa ari muUSA
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Akasiyana Nhau » Maguta matanhatu pagumi akanakisa epasirese ekutamisa ari muUSA
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! • Culinary • tsika nemagariro • dzidzo • Entertainment • Fashoni Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • Sports • Sustainability News • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Maguta matanhatu pagumi akanakisa epasirese ekutamisa ari muUSA.
Chidzidzo ichi chakaongorora zvinhu zvinowanzo fungwa pakusarudza kwekutamira, kusanganisira mitengo yemba, mari yekugara, muhoro wepakati, mamiriro ekunze, huwandu hwemaresitorendi nenzvimbo dzakasvibira, kumhanya kweinternet uye tarisiro yehupenyu.
Inonyanya kudhura yekutamisa nzvimbo iIstanbul, Turkey uko avhareji yemitengo yekugara pagore inongova $17,124.
Basel, Switzerland ndiro guta rinodhura zvakanyanya kutamira kwairi sezvo mutengo wepagore wekurarama uri $72,169.
Dubai ndiyo yakanakisa kutamiswa kwekuenda kana uri kutsvaga kutamira kune mamiriro ekunze ari nani, sezvo yakawana 10 yakakwana.
Tsvakurudzo itsva yaita yakaratidza nzvimbo dzakanakisa dzepasirese dzekutamira, uye maguta matanhatu eUSA ari pakati pegumi.
Austin, Texas inonzi nhamba yekutanga nzvimbo yekutamira kune, neCharleston uye Los Angeles uyewo kuisa pamusoro shanu.
Top 10 nzvimbo dzekutamira kune munyika
chinzvimbo manzwiro Tembiricha yeavhareji (°C) Avhareji mutengo weimba pa m2 Avhareji yemwedzi muhoro Mutengo wekugara pamwedzi (mhuri yevana) Kuwanda kwemaresitorendi Nhamba yenzvimbo dzakasvibira Kumhanya kweInternet (Mbps) Makore ekurarama chibozwa / 10
Guta rakanakisa munyika kutamira kune iri Austin, TX, USA. Austin ine yechitatu-yepamusoro internet kumhanya kweguta ripi zvaro mumasanji, pa87.5 Mbps. Pamusoro pezvo, guta rine zvibodzwa zvakanyanya maererano neavhareji tembiricha (20.4 ° C), uye yakakwira avhareji yemuhoro pamwedzi pamadhora mazana mashanu nemakumi matatu nemakumi matatu.
Kana iwe uri kufunga nezve kutama kunze kweUSA, yechipiri-yepamusoro zvibodzwa guta iri Tokyo muJapan. Tokyo inokwenenzvera nhamba yayo yemaresitorendi nenzvimbo dzakasvibira. Pamusoro peizvi, ine yakanakisa avhareji yekurarama hupenyu, nevagari vanogara kusvika makumi masere nemana.
Charleston, South Carolina ndiro guta rechitatu rakanakisa kutamira munyika. Chimwe chinhu chayakapfuura mukati iinternet kumhanya, avhareji i106.5 Mbps, zvichireva kuti ndiyo inokurumidza kupfuura chero guta ripi zvaro pane rondedzero.
Pasinei nekunzi 9th nzvimbo yakanaka yekutamira, San Francisco yakawanikwawo iri 6th inonyanya kudhura guta kutamira kune imwe nyika, ichitevera New York munzvimbo yechishanu. Mutengo wepagore wekugara muSan Francisco i$5, nepo mutengo wekugara muNew York uri $54,499.
Kana kutamiswa kwemahombekombe kuri kuita kwako, Daytona Beach ndiyo nzvimbo yakanakisa yekutamira kuUSA uye 6th nzvimbo yakanakisa yekufamba munyika, ichiteverwa neMiami.
Basel, Switzerland ndiro guta rinodhura zvakanyanya kutamira kwairi sezvo mutengo wepagore wekurarama uri $72,169, iyo inodarika $33,568 yakawanda pagore pane avhareji yemutengo wepagore wekugara we $38,558.
Inonyanya kudhura yekutamisa nzvimbo iIstanbul uko avhareji mari yekugara pagore inongova $17,124. Iyi i $55,045 zvishoma pagore pane kutamira kuBasel, uye $21,434 pasi peavhareji.
Dubai ndiyo nzvimbo yakanakisa yekutamisa kana uri kutsvaga kutamira kune mamiriro ekunze ari nani, sezvo yakawana zvakakwana 10. Avhareji yetembiricha muDubai i28.2 madhigirii celsius, uye kune 68mm yekunaya kwemvura pagore.
Guta reQatari reDoha ndiyo nzvimbo yepamusoro yekutamiswa iri pamhenderekedzo yegungwa, guta iri rakawana 7.53/10. Tembiricha yemvura muDoha i24.83 madhigirii paavhareji, ine zvakare mihoro yakakwira yemadhora makumi mashanu neshanu nemakumi mapfumbamwe nematanhatu.
Michael Roberts anoti:
Handina chokwadi chekuti ndiani akaita tsvagiridzo iyi, asi muruzivo rwangu semutorwa wekuAustralia anga achigara mhiri kwemakungwa kwemakore akati wandei hazvina musoro, uye zvinopokana neimwe tsvagiridzo yandakaona pamusoro penyaya! Zviripachena kuti vaongorori havana kunetsekana neSE Asia, Australia kana New Zealand.